Facebook Status In Nepali / FB in the Nepali Language
HomeNEPALI STASFacebook Status In Nepali / FB in the Nepali Language
Watsapp status April 01, 2021
Nepali status for social media and FB is used for sharing on various social media platforms like WhatsApp, Facebook, Instagram, and more and we get many options to share various posts, sad prices, quotes, stories, photos, and videos but the problem is that While we can get new behavior status on Facebook for some guys and guys so people pay more attention to our post so today we are in the Nepali language we share different places for you and you can easily copy and paste. On your social sites.
Here we have collected many FB observation statuses, FB status in Nepal, Nepali status FB, FB status engineering, FB status in Nepal, FB FB status for everyone who came to Geo. Fast and cheap internet in India The number of Facebook users in NEPAL has increased dramatically and now NEPAL has the second-largest number of Facebook users in the world ahead of the United States which is now in second place. This is because people in remote areas in India can now access high-speed internet at affordable prices, so the demand for mobility and price has also increased so we have compiled more terms and prices. With photos for you.
These days the demand for FB's behavior status and the price of living in NEPALI has increased so we have includedalot of our behavior status here as you can see in your profile picture. Use because that's the behavior these days. Everything for one person and you can’t achieve anything if you don’t haveapositive attitude.
Creative ideas for quotes, headlines, or social sites. Today we give you the top 20+ best rankings that will definitely put you on Facebook. One thing that came to my mind when I was writing this post is why do people need suchabig space for Facebook? I tell you
तर कल्पना गर्नुहोस् तपाईं केहि हुनुहुन्छ।
हामी मध्ये कसले यो आफ्नै लागि देख्छौं, यो द्रुत हत्या हो। तर थोरै आघातले मानिसहरूलाई बचाउन सक्छ।
केही व्यक्ति तपाईंको जीवनमा आशिष्को रूपमा आउँछन्; केहि तपाइँको दुनिया मा सिक्न को लागी आउँछ।
तपाईंले आफ्नो जीवनलाई अस्वास्थ्यकर बनाउन नाटकलाई चुनौती दिनुपर्दछ, उनीहरू सोच्नुहोस् भन्दा तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ भनेर देखाउन।
हामी हाम्रो जीवनमा पूर्ण रूपमा त्रुटिपूर्ण हुनको लागि जन्मेका थियौं।
तथ्य यो हो कि तपाईंको जीवनमा तपाईंको कुनै साथीहरू नहुन सक्छ तर तपाईंले विश्वास गर्नुपर्दछ कि तपाईं साँचो मित्र हुनुहुनेछ।
म जीवनको पूर्ण रूपले बाँच्न चाहन्न। मलाई राम्रो बायो चाहिएको छ। (अंग्रेजीमा वास्तविक जीवन)
यदि तपाईं भर्खरको कथा पढिरहनुभयो भने तपाईं आफ्नो विश्वमा नयाँ अध्याय सुरू गर्न सक्नुहुन्न।
निर्णय गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो जीवनमा कसैलाई भेट्नुहुनेछ र तपाईंको जीवनमा कसले बाँच्नेछ तपाईंको मनमा निर्णय गर्नुहोस्।
याद गर्नुहोस् यो केवल एक खराब दिन हो, न कि खराब जीवन।
हाँसो र जीवनको जीवन
जीवनको बारेमा धेरै सोच्नुहोस्। तपाईं जीवित हुनुहुन्न।
सबै कुनै न कुनै कारणले हाम्रो छिटो आउँछन्। जससँग केही छैन, बस्नुहोस्।
अरूसँग आफूलाई तुलना नगरी आफ्नो जीवनको आनन्द लिनुहोस्।
म सफलताको उदाहरण दिन सक्दिन, तर म यसलाई कमजोरीको लागि दिन्छु - त्यो हो: सबैलाई खुशी पार्ने कोशिश गर्दै।
यदि हामी विश्वास गर्छौं कि भोली राम्रो हुन्छ, हामी सायद आज समस्यामा छौं। (अंग्रेजीमा प्रत्यक्ष पक्ष)
सुन्दर वस्त्र पहिचान परिवर्तन गर्न सक्दछ, तर सुन्दर व्यवहारले जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ !!
केमा बुझाउनुहोस्। ती चीजहरूमा विश्वास गर्नेहरू होऊन्।
जीवनलाई सजिलो बनाउनका लागि दुई तरिकाहरू छन्: सबैमा विश्वास गर्न वा सबै कुरामा श doubt्का गर्न; हामीलाई सोच्नबाट जोगाउने दुई तरिकाहरू।
थोरैको लागि धन्यबाद, र तपाइँ अधिक पाउनुहुनेछ।
सबै केटीहरू जसले तपाईंलाई मोटो हो भन्ने लाग्छ किनकी तपाईंको मोटो छैन, तपाईं सुन्दर हुनुहुन्छ किनभने उनको समाज कुरूप छ।
हराएको समय फेरि फेला पार्न सकिदैन।
जीवन एक सुन्दर स्वर्ग जस्तै छ केवल पोइन्टहरू अलमल्लमा पर्छन्। (अंग्रेजीमा प्रत्यक्ष पक्ष)
सफल व्यक्तिहरू प्रायः सबै एकल अवस्थाको नियन्त्रणमा हुन्छन्। यसलाई सजिलो भएको चाहनुहुन्न। राम्रो हुन चाहन्छन।
मुस्कुराउनुहोस्, किनकि तपाई किन यति निराश हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गर्नु भन्दा यो सजिलो छ।
बेरोजगारी खुशी हो।
संसार एक आत्मा हो, हामी किन संघर्ष गर्दछौं?
जीवन केवल एक यात्रा हो।
सत्य भनेको तपाईले दिन सक्ने उत्तम चीज हो।
जीवन मोटरसाइकल चढेको जस्तो छ। तपाईंको सन्तुलन कायम गर्न, तपाईं अघि बढ्नु पर्छ।
के थाहा छैन हामी के थाहा छैन केहि पनि हराउन छैन।
जब तपाईं नराम्रो चीजहरूबाट टाढा रहनुहुन्छ सुन्दर चीजहरू हुन्छन्।
म एक्लो छु किनकि भगवान मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो प्रेम कथाहरू लेख्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ
गल्ती भयो कि तपाईंलाई नम्र बनाउँदछ यो तुलना भन्दा राम्रो छ कि तपाईं गर्व बनाउँछ।
पुस्तकहरु बिना कोठा एक आत्मा बिना शरीर जस्तै छ ...
यो गुणमा अलि धेरै सुन्दर छ।
सफल पुरुषहरूको पछाडि एक अद्भुत महिला हो।
असफलता केस होइन - यो विन्डोको साथ झोला हो!
मलाई एक पटक मूर्ख बनाउँनुहोस्, तपाईंलाई लाज दिनुहोस्, मलाई फालिदिनुहोस्, र तपाईंको अनुहार भाँच्नुहोस्।
के मलाई समस्या छ? यो पूर्ण गर्नुहोस्। मँ यो तोडिरहेको छु जस्तो लाग्छ? मेरो जुत्ता टाई मलाई खडा गर्न सक्दैन? बस। मलाई सामना गर्न सक्दिन? घुमाउनुहोस्।
खुशी भनेको हितोपदेश जस्तै हो। तपाईं पछाडि दगुर्दै र दौडिरहनुहोस्। यदि तपाईं रोकिनुभयो भने, यो आउँछ र तपाईंको काँधमा बस्दछ।
जीवविज्ञानमा कमजोर हुन कोसिस गर्नुहोस् तर संसारमा नपर्नुहोस् ...
खरबुजा बग्नु भन्दा पहिले जीवन आइसक्रीमजस्तै हो।
बाल्टिनमा जीवन सधैं धूप हुँदैन। कहिलेकाँही तपाई पीडामा मुस्कुराउन सिक्नुहुन्छ।
जीवविज्ञान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहस्य हो। कहिले थाहा हुँदैन कि यो कहाँ अन्त हुन्छ वा रोकिन्छ।
आफूले माया गरेको जीवनलाई माया गर्नुहोस्, र आफूले मनपराएको जीवन बिताउनुहोस् ... ??
यदि तपाईं राम्रो जीवन चाहनुहुन्छ भने, लक्ष्यमा टाँसिनुहोस्, व्यक्ति वा चीजहरू होइन।
प्रेम जीवन हो। यदि प्रेम हरायो भने, जीवन हराएको छ।
संसारमा सफल हुनको लागि तपाईलाई दुई चीज चाहिन्छ: अज्ञान र विश्वास।
जीवनमा हिंड्दैनौ, जीवनमा बढ्छ।
सबै तीनजना बाँचे; सार्वजनिक जीवन, गोपनीयता, र गोपनीयता।
आफ्नो बायो अर्को दुनिया संग तुलना आनन्द लिनुहोस् .... !!
जीवन १० तपाईले बनाउने तरिका हो, र you ० यो हो तपाईंले कसरी समाउनु भयो।
मैले मेरो संसार कसरी बाँच्ने भनेर निर्णय गर्नु अघि, म तपाईंलाई सुझाव दिन्छु कि आफैंलाई नियालेर हेर्नुहोस्।
स्वतन्त्र र मायालु र प्रेम बिना रहनु जीवन हो ... ????
मेरो बायो सिद्ध थिएन तर यो सबै समय थियो।
तपाईंले प्रेम गर्नुभएको संसारमा बस्न, तपाईंको जीवनलाई प्रेम गर्नुहोस्।
संसारलाई आकर्षक लाग्ने कुनै छनौट नगर्नुहोस्। तपाइँको संसार को सजावट को लागी एक छनौट गर्नुहोस्।
सफलता सँधै आफैंमा थाँहा रहन्छ ... तर असफलता सधैं मानिसहरूलाई पछाडि राख्छ! यो जिवन हो। #
हिजो इतिहास हो, भोलि रहस्य हो, आजको खजाना छ, त्यसैले यसलाई आज भनिन्छ।
जीवन चल्यो .... # बिना #
म केवल तपाईंको खेल लुकाईरहेकोमा मात्र हाँस्दै छु ताकि व्यक्तिहरूले हामीलाई यो पनि मनपराउँदछन्।
जीवविज्ञानले तपाईलाई चाहेको कुरा दिदैन। यसले तपाईलाई के गरिरहेको छ भन्ने बारे एक विचार दिन्छ।
तपाईं बाट भिडियो सबैलाई खुशी बनाउँछ, तपाईं यो मन नपरे पनि ... ??
कहिलेकाँही गलत विकल्पले हामीलाई सहि ठाउँमा पुर्‍याउँछ।
यदि तपाईंसँग बिदाइ गर्न साहस छ भने, जीवन र नयाँ आशाहरूले तपाईंलाई इनाम दिनेछ।
जीवन एउटा राम्रो कार्डको बारेमा होईन तर राम्रोसँग बस्ने मानिसहरूसँग खेल्ने बारेमा हो।
विगत सम्झनुहोस्, भविष्यको लागि योजना गर्नुहोस्, तर आजका लागि बाँच्नुहोस्, हिजो हिजो बितिसक्यो र भोलि आउँदैन। !!!
जीवन फिर्ता-पछाडिको फोटो जस्तै हो जहाँ व्यक्तिहरूलाई वास्तवमै थाहा हुन्छ उनीहरूसँग एक आर छ, आफैंको नजीक।
जीवन साइकल जस्तो छ। तपाईंको ब्यालेन्स राख्नुहोस्, तपाईंले हेलमेट सार्नु पर्छ !!!!
जीवविज्ञान महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईंसँग आफ्नो परिवार, साथीहरू, र प्रियजनहरू हुन्छन्
संसारमा हामी आफैंलाई सम्झनको लागि चीजहरू बिर्सन्छौं र हामीलाई संसारमा बिर्सने चीजहरू सम्झन्छौं।
तपाईले केहि गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबै पनि होइन।
म बौलाहा हुन सक्छु तर पागल हुनु पागल हुने उत्तम तरिका हो।
अझै जीवनको दोस्रो मौका छ। भोली बोलाइयो ... ???
जब तपाईं अन्त्य गर्न चाहानुहुन्छ, याद गर्नुहोस् किन तपाईंले सुरु गर्नुभयो
राम्रो समयले उदासी र खराब समयले राम्रो पाठ ल्याउँछ।
LOST अविस्मरणीय परिवर्तनहरू। सम्पादन वा मेटाउनुहोस्: केवल स्वीकार गर्न सकिन्छ।
बिभिन्न प्रश्नको उत्तर छ तर केहि समय पछि फेरि उत्तरमा प्रश्नमा परिवर्तन हुन्छ।
!! यो नराम्रो दिन याद गर्नुहोस्, न कि खराब जीवन ... ??
तपाईंको अनुहारमा व्यक्तिहरूको टिप्पणी prblm होईन। उनीहरूले भन्ने कुराको समस्या तपाईंको पछाडि छ।
अझै जीवनको दोस्रो मौका छ। यसलाई भोली भनिन्छ।
म आफ्नो उपस्थितिको अभिभावक हुँ र आज म रमाउने छनौट गर्दछु।
मुटु गिलास जत्तिकै हो, छवि गिलास जस्तै छ, र प्रेम गिलास जस्तो छ। तिनीहरूसँग समान गुणहरू छन्, तिनीहरू भाँचिए पछि मर्मत गर्न सक्दैनन्!
उसको कथा ईतिहास हो, मेरो कथा रहस्य छ।
म सधैं मेरो काका जस्तै करोडपति बन्ने सपना देख्छु! "उनी फेरि सुतिरहेकी छिन्।"
मलाई थाहा छैन यदि ती केटाहरूले एक मिनेट पछि लडाई गरे र तिनीहरूको फेसबुक स्थिति एकल रहनको लागि परिवर्तन गरे। म प्रायः आफ्ना आमाबाबुसँग झगडा गर्छु तर अनाथको रूपमा मेरो धारणा बदल्न सक्दिन।
तपाइँलाई मेरो माया के छ कि यात्रा सदाको लागि शुरू हुन्छ र सदाको लागि अन्त्य हुन्छ।
मेरो हात संसारको लड्न मा राम्रो छ ... यदि तपाइँ संग एक हात छ।
attitude status Fb Status in Hindi / facebook status NEPALI STAS
Best Cute Love Status for Whatsapp in English - love Status